Dib u Eegista Dib u Eegista: Adeegyada Kaydinta Wanaagsan ee Adeegyada Kuwa aan Codsadeynin
Inaad noqoto qof aan farsamo ahayn, waxaad la imaan kartaa caqabado hortaagan markaad doorato faa'iido leh duubista webka adeeg. Waa run in ay jiraan tiro badan oo barnaamijyo ah oo ka jira internetka. Qaar ka mid ah waxay ka soo qaadaan xogta cinwaanka iimeylka halka kuwa kalena ay bartilmaameedyada warbaahinta, goobaha safarka, iyo warbaahinta bulshada. Barnaamijyada soo-saarka xogta soo socda ayaa si gaar ah loogu talagalay dadka aan codeynin iyo dadka raba inay ka fogaadaan luqadaha barnaamijyada sida C ++ iyaga oo fulinaya waajibaadkooda.
Waa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican ee ugu faa'iida badan ee shabakada adeegga loogu talagalay kuwa aan codka lahayn. Khaaska ah ee Spinn3r waa in ay xoqin karto boggaaga oo dhan oo ka dhigaysa xogta laga helo bangiyada gaarka loo leeyahay, warbaahinta bulshada iyo RSS feed. Waxay isticmaashaa Firehose API waxana ay maamushaa in ka badan boqolkiiba 80 oo ka mid ah isdaba-gelinta iyo isku-socodka internet-ka. Intaa waxaa dheer, Spinn3r waxay kaydisaa macluumaadka la soo saaray ee JSON foomka waxayna leedahay lahaansho la mid ah Google. Waxay baari doontaa oo cusboonaysiisaa xogahaaga sida shuruudahaaga oo aad ku sameyso raadinta xogta qaaska ah, helitaanka xog tayo sare leh oo si wanaagsan loo qaabeeyey.
Octoparse waa mid ka mid ah adeegyadan xoqista macluumaadka kuwaas oo si sahlan loogu rakibayo. Waxaa si ballaaran loo ogaanayaa isticmaalka qaab-isticmaalka iyo muuqaalka leh. Octoparse waxay kuu fududeyneysaa inaad xoqdo xogta laga helo bogagga shabakada adag iyo la qabsashada isticmaalaha bini'aadamka iyadoo la soo saarayo macluumaadka iyo bartilmaameedyada goobaha iyo blogyada. Octoparse waxay kuu ogolaaneysaa inaad keydiso xogta laga soo qaaday daruurteeda ama ku soo qaad mishiinka maxaliga ah.
Fminer waa mid ka mid ah barnaamijyada ka faa'iideysanaya xogta ugu faa'iidada badan. Wuxuu isku daraa qeexida aduunka oo dhan wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad aragto xogtaada inta la xoqayo. Fminer wuxuu ka helayaa macluumaad ka yimid goobaha fudud iyo kuwa adag oo u baahan shuruudaha barnaamijka oo dhan. Haddii aadan aqoon aqoon farsamo, Fminer waa barnaamijka saxda ah ee adiga kugu habboon.
5. Hubinta Hub
Waa fidiye firfircoon oo awood leh oo aad ka soo dejisan karto oo u isticmaali karto Firefox joogto ah. Hubinta Hub waa mid ka mid ah qalabka wax soo saarka ugu fiican iyo kuwa ugu qurxoon. Ma aha oo keliya ururinta iyo xoqidda xogta laakiin sidoo kale waxay ku socotaa boggag kala duwan, adigoo fududeynaya inaad kor u qaaddo astaantaada. Inaad noqoto meel ka baxsan sanduuqa, barnaamijkani uma baahna xirfad wax barasho oo waa sahlan tahay in la isticmaalo.
6. Web Scraper - Extension Chrome